Motorola Moto Edge S: atụmatụ, ọnụahịa na nnweta | Gam akporosis
New Motorola Moto Edge S: weputara Snapdragon 870 ma nwee batrị 5000 mAh
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị na-enyocha ọkwa mwepụta nke ọhụụ ọhụrụ dị elu nke Motorola, bụ nke ewepụtarala ugbu a wee malite ya Moto Edge S. N'oge ahụ, anyị kọwara ọtụtụ isi atụmatụ nke ekwentị a ga-etu ọnụ », ụfọdụ n'ime anyị gosipụtara n'oge a, ebe ọ bụ na ngwaọrụ ahụ abanyelarị.
Maka ndị na - ebido ebido, aha ọtụtụ ndị na - enye n’ekwentị a bụ “flagship killer”, nwata ejighi ya jọ njọ. Anyị nwedịrị ike ịsị na ọ bụ ihe ịga nke ọma, nke a bụ n'ihi ọnụahịa nke ekwuputarala na China na-asọmpi na nke etiti ọ bụla, na-enweghị karịa, nke na-atọ ụtọ, n'ihi na Snapdragon 870 Ọ na-eyi n'okpuru mkpuchi bụ ihe dị ike karịa Snapdragon 865, Chipsetị arụmọrụ dị elu nke anyị na-ahụ na njedebe na ọnụahịa na-amalite site na 500 na 600 euro dị mfe.
1 Njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke Motorola Moto Edge S
Njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke Motorola Moto Edge S
Ihe mbụ anyị hụrụ gbasara Motorola Moto Edge S bụ ngebichi ya, nke bụ teknụzụ IPS LCD ma ọ bụghị AMOLED iji mee ka ọnụahịa nrụpụta ikpeazụ nke ekwentị dị nro. Agbanyeghị, ọ na-enye nnukwu mkpebi FullHD + nke pikselụ 2.520 x 1.080 nke sụgharịrị ịbụ usoro ngosi ngosi 21: 9. Nchịkọta ahụ kwadoro HDR10 ma nwee ike ịrụ ọrụ na nchapụta kachasị nke nits 1.000.
O nwekwara okpukpu abụọ na ihuenyo, nke a na-ejikọtaghị na modulu yiri pill, mana kewapụrụ, dị ka eserese nke eserese nke ekwentị. Nke a nwere igwefoto onwe onye nke 16 MP (isi) na 8 MP (obosara).
Banyere sistemụ igwefoto azụ, Motorola Moto Edge S nwere modul azụ nwere ihe mmetụta atọ nwere a 64 MP mkpebi isi shooter, Igwe elekere obosara nke 16 MP na ihe mmetụta bokek 2 MP maka ịgba omimi. Na nke a, anyị ga-agbakwunye okpukpu abụọ ọkụ na-eso ha ma ọ bụ ọrụ maka ịkọwa ọnọdụ ndị kachasị njọ.
Banyere processor chipset, dị ka anyị kwurula, ọhụrụ Snapdragon 870 bụ igwe okwu mkpanaka na-elekọta inye ike na ike na ekwentị, na 650 GPU, otu ihe ahụ achọtara na Snapdragon 865. Icheta ntakịrị, mpempe a bụ 7 nm ma nwee ike ịrụ ọrụ na ntinye ume elekere kacha elu nke 3.2 GHz.
Dị ka Motorola n'onwe ya si kwuo, Edge S dị elu karịa Xiaomi Mi 10 na AnTuTu. Nchịkọta ya zuru oke na ikpo okwu benchmarking bụ 680.826 isi, ma e jiri ya tụnyere ihe 585.232 maka Mi 10. Nọmba ndị a bụkwa n'ihi eziokwu ahụ bụ na RAM nke mobile, nke a na-enye na nsụgharị 6 na 8 GB, bụ ụdị LPDDR5, nke kachasị elu. maka mobiles; nke a bụ 72% ọsọ karịa LPDDR4. Ọ bụkwa n'ihi ROM, nke dị na nke a bụ UFS 3.1, nke bụ 25% ngwa ngwa karịa UFS 3.0. N'ebe a, anyị nwere ebe nchekwa dị n'ime nke 128 ma ọ bụ 256 GB nke ikike, enwere ike ịgbasawanye site na iji kaadi microSD ruo 1 TB.
Obodo kwụụrụ nke Motorola Moto Edge S na-enye site na batrị ikike 5.000 mAh. Ọ na-akwado teknụzụ na-ebu ọkụ ngwa ngwa 20W site na ọdụ ụgbọ USB Type-C.
Nhọrọ njikọta gụnyere nkwado maka 5G NA na netwọk NSA, Wi-Fi 6, na Bluetooth 5.1. Ọ nwekwara NFC abụọ na GPS. N'aka nke ya, ihe ndị ọzọ dị iche iche gụnyere agụpụta akara mkpịsị aka n'akụkụ, nguzogide mmiri IP52 ọkwa, yana nkụkọ isi nke 3.5mm.
Emeela Motorola Moto Edge S na China, yabụ ọ dị naanị maka ugbu a. Agbanyeghị, emesịa a ga-ahapụ ya n'ụwa niile, mana enweghị ụbọchị na nke a. Ọnụahịa ndị a kpọsara bụ ndị a; Ekwesiri iburu n'uche na n'èzí China, ndia gha abawanye n'ike:
6/128 GB mbipute: Euro 254 iji gbanwee ihe ruru. (1.999 yuan)
8/128 GB mbipute: Euro 305 iji gbanwee ihe ruru. (2.399 yuan)
8/256 GB mbipute: Euro 356 na mgbanwe mgbanwe. (Yuan 2.799)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » New Motorola Moto Edge S: weputara Snapdragon 870 ma nwee batrị 5000 mAh
Etu ị ga - esi mee ka ngosipụta ngosipụta oge niile na EMUI
Ihe ndekọ electrocardiogram na ọbara mgbali elu na Galax Watch 3 na 2 nọ n'ọrụ ga-abata na Spain na njedebe nke February